China Sheet mpanamboatra vy sy mpamatsy | P&Q
Ny P&Q dia tsy manana orinasa vita amin'ny metaly na CNC, fa afaka manome ireo faritra metaly arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa ihany koa. Kely ka hatramin'ny lehibe, efa be mpampiasa amin'ny jiro sy fanaka an-dalambe, sns.
Manatitra vidiny-Vahaolana mahomby
Mpanome serivisy mpanamboatra fifanarahana iray dia afaka manala anao amin'ny manahirana anao amin'ny famantarana sy ny fanamarinana ireo mpamatsy - indrindra ireo mpamatsy ivelany.
Ireo orinasam-pamokarana fifanarahana manana traikefa any ivelany dia afaka mamantatra haingana kokoa ny mpamatsy iray izay afaka manome izay ilainao tsara indrindra. Fantatr'izy ireo hoe orinasa iza no manana ny fahaiza-manao amin'ny fanamboarana ny faritra misy anao, efa nitsidika sy nanamarina ireo fotodrafitrasa famokarana, ary mahafantatra hoe iza avy ireo mpamatsy manana ny firaketana tsara indrindra ho an'ny fitaovana sy famokarana ara-potoana.
Ny tanjaky ny P & Q dia avy amin'ny fanamorana tsy tapaka ny indostria naroso, ny tobin'ny mpanjifa, ny dian-jeografika, ny paikady fampidirana ary ny fahazoana ny entam-barotra. Ny P&Q dia afaka mampihena ny vidinao, mampihena ny zavatra takinao amin'ny lisitra ary manapaka ny fotoana fitarihana.
Ny fizotry ny fitantanana mpamatsy P&Q dia mampiasa agents sy souriciel kalitao. Izahay dia manome mpamatsy mpamokatra miorina amin'ny kalitao, ny fotoana fandefasana ary ny vidiny. Ny masonay ho an'ny mpamatsy dia misy ny fanamarinana ISO, ny foibe fanamboarana mandroso, ny fahaizana voaporofo amin'ny fahaiza-manao nampanantenaina, loharanom-pahalalana ho enti-miasa, QA ary famokarana ara-potoana. Ireo mpamatsy P&Q rehetra dia tsy maintsy mandalo ny fanaraha-maso henjana ho an'ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra entana sy ny fiantohana kalitao. Takiana ihany koa izy ireo haneho fahaiza-manao kalitao sy fandefasana mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Tombon'ny Machining CNC
Mihena ny vidin'ny asa sy ny fitaovana
Fizarana tsy miova
Mitombo ny marina
Ny endrika sarotra tratra mora foana
Hafainganana amin'ny famokarana
Fitaovana ampiasaina ho an'ny Machining CNC
Teo aloha: Tsindrona plastika
Manaraka: Fivoriamben'ny vokatra vita sy vokatra semi-vita
Fivoriamben'ny vokatra vita sy semi-vita ...